Samsung ၏ခေါင်းဆောင်မှု 8 သည်အနာဂတ်လား၊ အနာဂတ်လား။ | Androidsis
Rafa Rodríguez Ballesteros | | မိုဘိုင်း, Samsung
ကိုရီးယားကုမ္ပဏီတခုကကျွန်မတို့ကိုအလယ်အလတ်တန်းစားမော်ဒယ်တွေကိုအဆက်မပြတ်ထုတ်လုပ်ခဲ့တယ်။ အများဆုံးချီးကျူးခံထားရသော high-end terminal များသည်နှစ်စဉ်အထွေထွေစည်းမျဉ်းတစ်ခုအဖြစ်ပေါ်လာသည်။ စျေးကွက်၏အရေးကြီးသောကဏ္sectorတွင်လွယ်ကူစွာလုပ်ဆောင်နိုင်သည့် Entry-level နှင့် Mid-range ဟုခေါ်သော Samsung စမတ်ဖုန်းမိသားစုကြီးရှိသည်။
ထို့ကြောင့်သင်တစ်ခါမျှမကြားဖူးသောမော်ဒယ်များဖြစ်နိုင်သည်။ ဒီနေ့ခေတ်တွင်များပြားလှသောတွဲဖက်ထုတ်လုပ်သောပုံစံများနှင့်မော်ဒယ်များကြောင့်၎င်းတို့အားလုံးကိုထိန်းချုပ်ရန်မဖြစ်နိုင်သလောက်ရှိသည်။ ဒါပေမယ့်သူတို့အကြား သတိထားမိစရာမလိုသော Samsung မော်ဒယ်သစ်တစ်ခုရှိသည်။ အသစ်သောခေါက်ဖုန်းတစ်ခုဖြစ်သည့် Leadership 8.
1 Leadership 8 သည်မျှော်လင့်ထားသည့်ခေါက်နိုင်သောစမတ်ဖုန်းမဟုတ်ပါ
Leadership 8 သည်မျှော်လင့်ထားသည့်ခေါက်နိုင်သောစမတ်ဖုန်းမဟုတ်ပါ
ဒါဟာကောလာဟလများနှင့်ခေါက်ဖန်သားပြင်အကြောင်းကိုကြော်ငြာ nauseam ရေးသားခဲ့သည်။ မကြာခင်မှာပဲငါတို့တစ်ဝက်ခေါက်နိုင်ပါလိမ့်မယ်သောသူတို့အားစမတ်ဖုန်း။ ဒါပေမယ့်ဒီမော်ဒယ်ကဒါမဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒီအစား လက်ကိုင်ဖုန်းအယူအဆ၏လက်ရှိနည်းပညာများနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ခြင်း သော၎င်း၏ဆွဲခဲ့ရသည် စမတ်ဖုန်းအကြိုခေတ်.
တယ်လီဖုန်းအဟောင်းများသည်၎င်းတို့အားဖွင့်ခြင်းနှင့်ပိတ်ခြင်းကြောင့်“ shell” ဟုခေါ်သည်။ အင်တင်နာကိုဖွင့်ပြီးဖယ်ရှားလိုက်သောဒဏ္myာရီဆန်သော Motorola Startac သည်လွန်ခဲ့သောအနှစ် ၂၀ ကျော်ကတကယ့်အောင်မြင်မှုဖြစ်ခဲ့သည်။ ပုံရသည် Samsung သည်၎င်း၏ခေါင်းဆောင်မှုအသစ်နှင့်အတူဤဖုန်းသဘောတရားအတွက်ဈေးကွက်တွင်ကွာဟမှုရှိနေသေးမလားစူးစမ်းလိုသည် ဂန္ထဝင်ဟုသတ်မှတ်သည်။
El ခေါင်းဆောင်မှု ၁၀၁, စိတ်ဝိညာဉ်သို့မဟုတ်ကျော်လွှား၏ဖြစ်နိုင်ခြေမရှိဘဲအလွန်ကြီးစွာသောသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အတူရှုပ်ထွေးခြင်းမရှိဘဲတင်ဆက်ထားပါသည်။ အချည်းနှီးမဟုတ်ဘဲကနှိုင်းယှဉ်ထက်ပိုရှိပါတယ် Qualcomm Snapdragon 820 ပရိုဆက်ဆာ အနည်းငယ်သတိပညာဖြင့်လိုက်ပါသွား RAM ကို4GB အထိ။ သိုလှောင်နိုင်စွမ်း 64 GB ကို micro SD က၎င်း၏သက်ဆိုင်ရာ extension ကို၏ဖြစ်နိုင်ခြေနှင့်အတူ။
တပ်ဆင်ထားပါတယ် 4,2″ HD resolution ဖြင့် Super AMOLED မျက်နှာပြင်နှစ်ခုရှိသည် တစ်ခုချင်းစီကို။ ကိရိယာဖွင့်စရာမလိုပဲရှေ့မျက်နှာပြင်တွင်သတိပေးချက်များအားလုံးကိုကြည့်ရှုနိုင်ခြင်း။ အဲဒါရှိတယ် နောက်ကင်မရာ 12 Mpx နှင့်ရှေ့ကင်မရာနောက်ထပ်5Mpx။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကီးဘုတ်ကိုပြန်သွားနိုင်မလား။ ဖုန်းတွင်ရှိသောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသော့များကိုလက်လွတ်ဆုံးရှုံးသူများရှိသေးသည်။ Samsung Leadership 8 သည်၎င်းကိုထပ်မံအသုံးပြုနိုင်ရန်အခွင့်အရေးပေးပါမည်။
သင်တွေ့မြင်နိုင်သည့်အတိုင်း၎င်း၏သတ်မှတ်ချက်များသည်မည်သည့်လက်ရှိစမတ်ဖုန်းကိုမျှမငြူစူပါ။ နှင့် 2.300 mAh ဘက်ထရီ အရာကိုလည်းခွင့်ပြုပါတယ် ကြိုးမဲ့အားသွင်း ဒီမူရင်း smartpohe ကိုကတိပေးထားတယ်။ ၎င်းမှတစ်ဆင့်သော့ဖွင့်ခြင်းပင်ပါဝင်သည် လက်ဗွေဖတ်စက်။ ဒါပေမယ့်မင်းတို့စိတ်လှုပ်ရှားပြီးပြီဆိုရင်ငါတို့မှာသတင်းဆိုးတွေရှိတယ်။ နိယာမအားဖြင့်ခေါင်းဆောင်မှု 8 သာစျေးကွက်အတွက်ရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်.
ကျွန်ုပ်တို့သည်တရုတ်၌ရရှိသောအောင်မြင်မှုအပေါ် မူတည်၍ Samsung သည်အမေရိကန်သို့မဟုတ်ဥရောပစသည့်စျေးကွက်များ၌ယင်းကိုမိတ်ဆက်ရန်စဉ်းစားနိုင်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ထင်မြင်သည်။ သင်စမတ်ဖုန်းအားလုံးအတူတူဖြစ်ခြင်းကိုငြီးငွေ့နေပါသလား။ မျက်နှာဖုံးပါတဲ့စမတ်ဖုန်းကိုပြန်သွားမလား။။ ထိုကဲ့သို့သော terminal ကိုဆိုလိုသောအယူအဆပြောင်းလဲမှုကြောင့်သာစျေးနှုန်းကမတားဆီးနိုင်ပါကအရောင်းအောင်မြင်မှုဖြစ်နိုင်သည်။
Times and Fashions များသည်တဖြည်းဖြည်းတိုးတက်ပြောင်းလဲလာသည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည်မေ့လျော့သောအယူအဆများကိုပြန်လည်ထူထောင်ခြင်း၏အောင်မြင်မှုကိုကျွန်ုပ်တို့မကြာခဏတွေ့မြင်နိုင်သည်။ မည်သည့်ယဉ်ကျေးမှုနယ်ပယ်တွင်မဆိုအသုံးချနိုင်သော၎င်းသည်စမတ်ဖုန်းများသို့လည်းရောက်ရှိနိုင်သည်။ ပြီးတော့အောင်မြင်မှုကိုမြင်ရင်ဥပမာ၊ စပျစ်သီးလို့ခေါ်တဲ့အရာအားလုံးကဒီမဟာဗျူဟာဟာသင့်တော်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်ငါတို့ဘယ်လိုမြင်ကြပြီ «ဂန္ထဝင်»ဂိမ်းစက်များသည်စျေးကွက်အသစ်သို့ပြန်လည်ရောက်ရှိခဲ့သည်။ ပိုမိုအားကောင်းသည့်ဆော့ဖ်ဝဲနှင့်အသစ်သောအယူအဆအပေါ် အခြေခံ၍ လုပ်ငန်းဆောင်တာအသစ်များဖြင့်သူတို့သည်အများပြည်သူထံမှကြီးမားသော reception ည့်ခံမှုကိုရရှိခဲ့ကြသည်။
Samsung ၏ Leadership 8 အသစ်သည်စမတ်ဖုန်းဒီဇိုင်း၏အလှည့်အပြောင်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်တိုင်ကြားမှုများကိုဖတ်ပြီးကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတစ်ခုသို့မှတ်ချက်များကိုကူးယူလေ့ရှိသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်သူတို့ကိုယ်တိုင်ကဆင်ခြေပေးမှုသည်ပုံစံသည်သူ့အတွက်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုများစွာမပေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ခေါင်းဆောင်မှု ၎င်းသည်စမတ်ဖုန်းများတွင်ဒီဇိုင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဆန်းသစ်တီထွင်မှုအတွက်နေရာရှိနေသေးသည်ကိုပြသသည်။
Samsung မှပြုလုပ်သောကတိက ၀ တ်သည်“ မတူညီသော” ထုတ်ကုန်များကိုတီထွင်ရန်အားပေးသည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သိသောစမတ်ဖုန်း၏အယူအဆကိုအခြားကုမ်ပဏီအချို့ကတနည်းနည်းဖြင့်ဝံ့ဝံ့နေမည်ကိုစိုးရိမ်ပူပန်မိသည်။ အောင်မြင်မှုသို့မဟုတ်ရှုံးနိမ့်မှုသည်၎င်းသည်ကမ်းလှမ်းထားသည့်အသစ်အဆန်းပေါ် မူတည်၍ လူအများက၎င်းကိုဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်တစ်ခုသို့မဟုတ်နောက်ပြန်လှည့်ခြင်းတစ်ခုဟုယူဆပါကမူတည်လိမ့်မည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » Samsung ၏ခေါင်းဆောင်မှု 8 သည်အနာဂတ်လား၊ အနာဂတ်လား။